डाक्टरसँग मारपीटपछि सफदरगञ्ज अस्पतालमा तनाव, अनिश्चतकालिन हडतालको घोषणा - Everest Dainik - News from Nepal
डाक्टरसँग मारपीटपछि सफदरगञ्ज अस्पतालमा तनाव, अनिश्चतकालिन हडतालको घोषणा
नयाँ दिल्ली । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा रहेको सफदरगञ्ज अस्पतालमा अनिश्चितकालका लागि सेवा बन्दको घोषणा गरिएको छ ।
आम मानिसका लागि निकै लोकप्रिय मानिने सफदरगन्ज अस्पतालमा बिहिबारका दिन एकजना चिकित्सकमाथि हातपात भएपछि डाक्टरह
रुले अनिश्चितकालिन हडतालको घोषणा गरेका हुन ।
मारपीटपछि आवासीय चिकित्सकहरुको संगठनले व्यवस्थापनलाई पत्र लेख्दै चिकित्सकहरुको सुरक्षाको माग गरेका छन् ।
आवासीय चिकित्सा संघका अध्यक्ष डा. प्रकाशले जनाए अनुसार बिहिबारका दिन क्रोनिक रोगबाट पीडित एकजना ४० वर्षीय बिरामी अस्पतालको वार्ड नं. १२ मा भर्ना भएको थिए । गम्भीर अवस्था भएकोले बिरामी मृत्यु हुन पुगेपछि चिकित्सकहरुले वेवास्ता र लापरवाही गरेको भन्दै मृतकका आफन्तले ड्यूटीमा रहेका एकजना डाक्टरमाथि हातपात गरेका थिए ।
याे पनि पढ्नुस हडताल गरेको आरोपमा ४८ हजार कर्मचारी बर्खास्त !
निकै ठूलो संख्यामा जम्मा भएका उनीहरुले लट्ठी र फलामे छड समेत बोकेको डा. प्रकाशले जनाएका छन् । घटनामा डाक्टरलाई चोट लागेको छ ।
उक्त घटनामा मृतकका आफन्तमाथि कानुनी कार्वाही शुरु नगरिएसम्म र डाक्टरको सुरक्षाको ठोस व्यवस्था नभएसम्म हडताल जारी रहने चिकित्सहरुले जनाएका छन् ।
आजै स्वास्थ्यमन्त्री डा. हर्षबर्धन सफदरगन्ज अस्पताल आउने भएका छन् । उनले स्पोटर््स इन्जुरी सेन्टरको वार्षिक कार्यक्रममा केही नयाँ परियोजना शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम छ । हडतालमा बसेका डाक्टरहरुको बिरोधको सामना मन्त्री हर्षबर्धनले गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
ट्याग्स: सफदरगन्ज अस्पताल, हडताल